10 Ndụmọdụ ingnọgide na-enwe ọdịdị mgbe ị na-eme njem | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ndụmọdụ ingnọgide na-enwe ọdịdị mgbe ị na-eme njem
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 02/06/2020)
Staynọgide ụdị gị mgbe ị na-eme njem bụ ihe ịma aka. A na-enyekarị nri na-agbanwe agbanwe. Nke a jikọtara ya na oge ezumike gị, nke na-edugakarị ịkwado n'ụgbọ ahụ. Yabụ kedu ka mmadụ ga-esi nọrọ n’iru mgbe ọ na-eme njem? O sighị ike ka ị chere. Naanị rapara na iwu ole na ole, jiri ikike mee ihe, you ga-enwekwa ike ịlaghachi n'ụlọ otu ahụike ahụ bidoro ezumike gị.
Gbalie Ike Ka Can Pụrụ Inwe Ahụ Ike
Ọ bụ ezie na eji ụgbọ njem ọha nwere ike ịda ka atụmatụ kachasị mfe, Gbalịa ịga ije kama. Zọ dị mkpirikpi dị mma maka ndị na-adịghị mma, n'agbanyeghị na ị na-eme ihe ndị ọzọ, ahụ ike gị mgbe ị na-eme njem ga-abawanye. Gagharị dị ogologo nwere ike ime ihe dị iche mgbe ị na-anọ n'ụdị mgbe ị na-eme njem maka ndị dabara nke ọma. Tụlee ịpụ na bọs gị ma ọ bụ tagzi na obere bọọlụ tupu ị nwee ike ije ije nke ọzọ. Insgbọ oloko bu, n'ezie, Ọzọkwa nnukwu ụzọ iji gaa gburugburu ọ bụghị naanị site na mba gaa na mba, ma site n'obodo ruo n'obodo na n'ime obodo. Buli ụgbọ oloko gị rute ebe ị ga-amalite n'oge, ma were saịtị na ụda nke ebe ezumike gị iji bulie ikike ị nwere ịnọ n'ụdị mgbe ị na-eme njem.
Kpochapu Stuff ziri ezi
Y’oburu n’ichoo idi n’odidi mgbe i na eme njem, jikere iga n’ihu, ma obu ije, ma ọ bụ ọbụna ịgba ígwè ka ịchọrọ ijide n’aka na ịnwere akụrụngwa kwesịrị ekwesị. Buru nke a n'uche mgbe ị na-ebu. Ọ bụrụ n’ịhọrọ, n’etiti ụzọ ọzọ dị mma akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ụzọ sneakers, kpoo ndi igbo. Ọ dịghị ihe ga-emebi karịa ịga ebe mara mma, alizingmara na RE chọrọ n'ezie ịgba ọsọ, na enweghi ike n'ihi na ị hapụrụ igwe nri dị n'ụlọ. Bili n'isi na ịga ịgba ọsọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma nke nlegharị anya. Tupu onye ọ bụla ọzọ akwa, ụwa dị jụụ ma mara mma. Enweghị ike ime nke a na jeans na akpụkpọ ụkwụ n'agbanyeghị.
Tọọ Wepụ 15 Nkeji ole maka inọrọ n’uche mgbe ị na-eme njem
Innọgide na-enwe ọdịdị n ’ịga njem bụ ihe gbasara mmega ahụ. Gaghị atụ anya idobe oke akwara gị na ahụike ka ị na-eme njem ma ọ bụrụ na ị na-eri ọtụtụ nri, a loụ nnukwu mmanya, emekwala mgbatị ahụ ọ bụla. Only naanị mkpa 15 nkeji kwa ututu iji nwetara mgbatị ahụ. Y’oburu na onodu ebe ihe dika eke, pụọ tupu ya arụsie ọrụ ike, ma mee yoga ma obu ume ike n’ájá. Enwere ike inweta Cardio site n'ịgba ọsọ, ibugo onu, ma ọ bụ igwu mmiri na-acha uhie uhie. YouTube nwere ọtụtụ vidiyo dị mma nke nwere echiche maka mkpụmkpụ, mgbatị ahụ dabeere na ezumike iji lekọta ma melite mgbatị ahụ mgbe ị na-eme njem. Gbalịa ịghara ịindụbiga mmanya ókè na mgbede, n'ihi na nke a ga-emetụta ọrụ mgbụsị akwụkwọ ụtụtụ gị ma n'ikpeazụ etu ị nọrọ nke ọma mgbe ị na-eme njem.
Nọrọ na Nkọ mgbe ị na-eme njem Site na I rie nri
Na-atọ ụtọ, ụlọ ebe ihe ọkụkụ na ihe ọma dị iche iche nwere ike ịgbata gị n'ihu iko, mana obu ezigbo echiche mgbe niile idobere anya ikike. Rie nụ nri, n'ụzọ ọ bụla, mana ebinyela aka. Tinye n'ime mkpụrụ osisi maka nri ụtụtụ, na salad maka nri ehihie iji nyere gị aka ịnwe ọdịdị n'ụzọ mgbe ị na-eme njem. Zọ ahụ i debere obere calorie gị ka ọ nwee ike ị toụ obere nri.
Ingnọgide na-ahụ mgbe ị na-eme njem Site Na Inweta steepụ
Ọ bụrụ n’ị na-ebi na nkwari akụ nwere ọtụtụ ala, ị nwere ohere zuru oke! Kama iburu igwe mbuli elu, were steepụ! Changedị omume a na - agbanwe agbanwe ga - enwetacha ọtụtụ kadio n'ime ụbọchị gị niile, wee mee ka ị nweta ahụike na ahụike karịa. Ọ bụrụ na ịnweghị steepụ ọ bụla ma ọ bụ naanị otu ụgbọ elu, chọta ụfọdụ na mpaghara gị ozugbo wee gbadata gbadata ugboro ole na ole iji nyere gị aka idozi ya mgbe ị na-eme njem.
Ghaa igwe kwụ otu ebe iji nọrọ n'ọnọdụ mgbe ị na-eme njem
N'otu ụzọ ahụ anyị tụrụ aro ka ị jee ije kama ịnwe ụgbọ ala, Gbalịa ịgbazite igwe kwụ ọtọ kama ijide ụgbọ njem. Ọtụtụ mba ga-enwe anyịnya igwe dị maka ịgbazite. Ijide ụgbọ oloko rute ebe ị na-aga, wee werekwa igwe kwụ otu ebe werezie ụzọ ahụ. Mgbe ị chọrọ ịlaghachi, na-alaghachi azụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè hapụkwa igwe kwụ otu ebe ị hụrụ ya, Ọ dị mma ịnọ n'ụdị ya mgbe ị na-eme njem!
Lelee ihe ndị dị n’obodo ahụ ma nọrọ n’ụdị mgbe ị na-eme njem
Ọtụtụ mba nwere atụmatụ obodo n'obodo ha. Yoga ma ọ bụ calisthenics na ogige ma ọ bụ hikes a haziri ahazi na-enwekarị. Soro na-eme ihe ndị a ka ị nọrọ n’ụdị mgbe ị na-eme njem. CrossFit bụ ihe ọzọ dị n'ụwa niile na-eme ka ahụ dị mma mma, yabụ wepụta oge iji wepụta oge iji sonyere klaasị, ma n’ime ma n’èzí. Ntuziaka ma ọ bụ nkwekọrịta mpaghara gị kwesịrị inwe ike igosi gị ụzọ ziri ezi maka ndị a.
Jiri ụgbọ oloko na ọdụ ụgbọ elu dịka Okporo ckszọ
Much nwere obi ụtọ dịka ịnwe ụgbọ oloko, ọnweghị ohere dị ukwuu maka mmega ahụ ka ị na-akpaligharị. Otu ihe a na-aga maka ụgbọ elu. Ka ị na-eche ụgbọ elu gị ma ọ bụ ụgbọ oloko gị, were ohere ikwunye na ntị ụfọdụ ma jiri ọdụ na-aga gburugburu iji nyere aka ịnya n'ụdị mgbe ị na-eme njem.. Jide n'aka na akpa gị adịghị mma, Otú ọ dị! Hapụ onye ị tụkwasịrị obi mgbe ọ bụla. Ka ị na-aga, tinye ụfọdụ nkuume n’ajọ. I nwere ike ile anya, mana ahụ gị ga-ekele gị ma emechaa. Staynọgide n’uche mgbe ị na-eme njem gụnyere iwere ohere ọ bụla dapụtara onwe ya. Detuo tiketi ụgbọ oloko gị ebe a ugbu a, ma nye onwe gi oge ezumike iji rụọ ọrụ nke ọma!
Kpokọtara Ndị Na-ahụ Maka Ahụ Ike Gị Nọrọ na Ahụhụ Mgbe ị na-eme njem
Ihe eji eme ka ahu di egwu, ọ dị mfe iburu gị na ụzọ dị mma iji dozie ụzọ mgbe ị na-eme njem. Nwere ike ịtọlite ​​ha n’ime ụlọ gị, ma mepụta obere mgbatị ahụ n’ebe kachasị adaba. Wepụta oge kwa ụbọchị iji mee okirikiri ma ọ bụ ise nke sekit gị, Ọ gaghị ewute gị nke ukwuu maka iri ụdị nri anụ ezi niile.
Na-ebelata Mmanya Na-aba n'Anya
Inwe mmanya ahụ n'akụkụ ọdọ mmiri, ma ọ bụ icy biya na palọ na-adị mma mgbe niile. Donafere ya oke ga - eme ka ike gwụ gị. Ọ bụghị naanị n'ihi shuga kamakwa enweghị mkpali na-esote ụbọchị. Nwee mmanya izugbe ma ọ bụrụ na ịchọrọ, kama nwaa idobe ya n’obere. Cheta na mmanya dị ụtọ nke nwere oke ume dị kalori, dị ka biya na ọbụna mmanya ọcha. Themrụ ọrụ ha ka onye ọzọ nye aka mee ka ọ dị mma mgbe ị na - eme njem ga - eme ka mgbatị ahụ ị kpara siri ike karịa.
Travelga njem bụ ihe ọchị n'ọtụtụ oge. Ọ nwere ike, Otú ọ dị, bụrụ ihe na - akpaghasị ọchịchị ọ bụla mma. Ingnọgide ụdị ahụ mgbe ị na-eme njem bụ ịrapara na usoro iri nri dị mma yana ị na-emega ahụ mgbe ọ bụla ị nwere ike. Echefukwala ịmachi ị drinksụ mmanya na-egbu egbu. Họrọ Save A Train, ọ ga-amasị anyị inyere gị aka ịnụ ụtọ njem gị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Ndụmọdụ ingnọgide na-enwe ọdịdị mgbe ị na-eme njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-staying-shape-traveling%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie es fr ma ọ bụ nl na ọtụtụ asụsụ ị họọrọ.
europetravel longtrainjourneys Nọrọ NọInShape Train Travel Travelingtips